पूजा गर्ने समयको विषयलाई लिएर झ’डप, १२ घा’इते ! – Life Nepali
पूजा गर्ने समयको विषयलाई लिएर झ’डप, १२ घा’इते !
सप्तरी– सप्तरीको शम्भुनाथमा दशैंको अवसरमा आयोजित रामलिलाको समय विषयलाई लिएर उत्पन्न वि’वादपछि भएको कु’टपि’टमा १२ जना घा’इते भएका छन् । घा’इते मध्ये चा’रको अ’वस्था ग’म्भिर छ । शम्भुनाथ १ खोक्सरस्थित दुर्गा मन्दिर प्राङ्गणमा दशैंको अवसरमा आयोजना गरिएको रामलिला कार्यक्रमको समय विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले उग्र रुप लिएपछि पूजा समिति पक्षधरको कु’टाईबाट १२ जना घा’इते भएका हुन् । ग’म्भिर घा’इते हुनेहरुमा शम्भुनाथ नगरपालिका १ बस्ने खेम बहादुर कार्की, कौशलकुमार यादव, प्रमोद कोइराला तथा रुपनी गाउँपालिका १ का रामबाबु यादव छन् ।
स्थानीय युनिक अस्पतालमा भर्ना भएका चारै जनाको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि बुधबार बिराटनगरस्थित न्यूरो अस्पताल रेफर गरिएको डा. प्रमोद साहले जानकारी दिए । यस्तै कु’टपि’टबाट धिरेन्द्र चौधरी, मो. समिम, रमेश कुमार यादव, अशोक यादव, सरोज कार्की, देवसुन्दर यादव, सन्तोष साह र ओमकान्त साह पनि घा’इते भएका छन् । उनीहरुको युनिक अ’स्पतालमै उ’पचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले घ’टना अनुसन्धानको क्रममा पूजा समितिका अध्यक्ष इनरदेव साह, कोषाध्यक्ष दिलिप चौधरी, सदस्य हिरु चौधरी, पुन्ति यादव र रामचन्द्र साह लगायत पाँचजनालाई प’क्राउ गरेको छ । घ’टनामा संलग्न अन्य केही फ’रार रहेको र खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । मंगलबार राति ८ बजेतिर रामलिला कार्यक्रम चलिरहेको बेला दुई पक्षबीच झ’डप शुरु भएको थियो । स्थानीयका अनुसार पूजा समितिले रामलिला कार्यक्रम राति १ बजेसम्म चलाउने तथा अर्को पक्षले राति १२ बजेसम्म मात्र चल्न दिने अडान राखेपछि झ’डप शुरु भएको थियो ।
सोही क्रममा वडा अध्यक्ष समेत रहेका पूजा समितिका अध्यक्ष इनरदेव साहको नेतृत्वमा एक समूहले लाठी, फठ र फलामे रडबाट अ’न्धाधुन्द आ’क्रमण गरेको घा’इतेहरुले बताए छन् । पूजा समिति नेकपा तथा घा’इते पक्ष काँग्रेस र राजपा पक्षधर हुन् । यसैबीच राजपाका केन्द्रीय सदस्य दिनेश यादव तथा नेपाली काँग्रेस सप्तरीका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवको नेतृत्वमा बुधबार एक टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगि घ’टनाको सत्यतथ्य छा’नबिन गरि दो’षिमा’थी क’डा का’रवाहीको माग गरेका छन् । यता रातिदेखि नै गाउँ त’नावग्र’स्त बनेपछि थप अ’प्रिय घ’टना हुन नदिन अहिले त्यस क्षेत्रमा ब्या’पक प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
Previous राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा ऐतिहासिक प्रभाव पार्नेछ : चीन
Next धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा रातारात हुँने काम अरु समयमा किन हुँदैन ? भीमार्जुन